Samsung dia manolotra ireo fiasa vaovao amin'ny sisin'ny sisin'ny | Androidsis
Samsung dia manambara fiasa vaovao amin'ny sisin'ny Edge miolakolaka
Manuel Ramirez | | MWC, About us, Samsung
Izahay dia mahita terminal maro hafa izay manolotra tontonana faharoa, toa ny LG V10 na ilay efijery LG X fotsiny, mba hahafahan'ny mpampiasa mahita haingana raha manana fampandrenesana vaovao ianao toy ny hafatra, mailaka na antso tsy tratra. Ny fironana iray izay mety hananana kilema kely amin'ny fanjifana bateria bebe kokoa, noho izany dia atolotra amina fitaovana misy bateria ambony kokoa na misy Android 6.0 an'ny Android izay manana toetra miavaka amin'ny fahombiazan'ny angovo amin'ny terminal. Na izany aza, ity taona ity dia mety ho an'ny takelaka faharoa ho fomba iray hanolorana fiasa hafa manintona ny sain'ny mpampiasa ary vao mainka aza raha ny Galaxy Galaxy S6 dia nahazo fanekena tsara kokoa noho ny nandrasana tamin'ny voalohany.
Amin'ity fanontana vaovao an'ny Galaxy S7 sisiny ity, Samsung mamerina izany efijery faharoa manokana izay mamela ny fidirana amin'ny karazana fampandrenesana rehetra hampiditra, raha tianao, ny vaovao mifandraika indrindra momba ny toekarena na ny fanatanjahantena miaraka amin'ireo mpanangona vaovao isan-karazany. Androany dia ny Samsung mihitsy no nandefa fidirana avy amin'ny tranonkalany maneho hevitra momba ny zava-baovao sasany amin'ny efijery farany amin'ny Galaxy S7 manaraka izay hasehon'ny orinasa ao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona. Anisan'ireo zava-baovao ao amin'ny tontonana misy ny vahaolana avo kokoa izay mahatratra hatramin'ny 550 teboka na ny safidy hamoronana hetsika kalandrie na hametrahana fanairana.
1 Vaovao misimisy kokoa momba ny tontonana
2 Fanapahan-kevitra avo kokoa
3 Ny fifandraisana sy ny fampiharana anao eo akaiky eo
4 Mamorona asa avy amin'ny sisiny
Vaovao misimisy kokoa momba ny tontonana
Ity takelaka ity dia mamaritra ny marina raha ny famolavolana no resahina Tena mahavariana tanteraka izany. Fiolahana iray eo amin'ny efijery izay manome fahatsapana hafa ary mamaritra ny terminal, ny S7, izay hahitana zorony boribory ary azo lazaina ho ny Galaxy miaraka amin'ny fiolahana be indrindra hatramin'izao.
Ireo fanatsarana ny tontonana dia mankany a nihatsara ny sisin'ny efijery ary andiana fiasa vaovao izay mamela ny fifandraisana miaraka aminy hanao asa kely. Amin'ny swipe tsotra vitsivitsy dia afaka manao hetsika kely ianao ary mahazo ny fampahalalana mety amin'ny fomba iray izay mandeha amin'ny ambaratonga hafa noho ny teo aloha tamin'ny kinovan'ny Galaxy S6.
Fanapahan-kevitra avo kokoa
Ny kinova voalohany an'ny efijery Galaxy S6 edge nanana fanapahan-kevitra 260 teboka, izay nametra ampahany betsaka tamin'ny atiny azo aseho. Ankehitriny, ny mpanamboatra Koreana dia nanatsara ny traikefan'ny mpampiasa tamin'ny nahatratrarana 550 teboka, izay avo roa heny ny fahafahan'ny atiny azo aseho amin'ny alàlan'ity tontonana ity.
Ity fanavaozana ao amin'ny vahaolana ity dia midika hoe tonga ny fahaiza-manao vaovao hanatsara bebe kokoa an'ity tontonana ity, izay ahafahana mampitombo ny fanjifana bateria satria misy mihoatra ny avo roa heny ny teboka naseho teo amin'ny efijery.
Ny fifandraisana sy ny fampiharana anao eo akaiky eo
Ny efijery sisin-dàlana dia mamela fisongadinana miavaka sasany toy ny tontonana, sisin-dàlana mankany amin'ny fampahalalana sy asa sasany. Ireo mpampiasa dia afaka manamboatra tontonana hatramin'ny sivy izay misy ny contact na People and the apps.
Ny tontonana fifandraisana dia mamela anao hanana fidirana mivantana amin'ireo sakaiza tianao indrindra avy amin'ilay faritra iny ihany. Teo aloha ity endri-javatra ity dia nampiseho sary kely dia kely an'ny fifandraisana dimy manan-danja indrindra an'ny mpampiasa izay mifandray amin'ny mombamomba azy ireo; izao ireo aseho eo ambanin'ireo sary ho an'ny fanandramana mivoatra. Tombony kely iray hafa koa ny fampidirana sary masina ho an'ny toe-javatra eo ankavia havia.
Raha momba ny fampiharana, ity takelaka ity dia misy ny fahaizanamba hampidirina amina fampiharana 10 ary na dia ny fahaizana mampiseho fampirimana iray manontolo aza mba hanana fikambanana mety kokoa mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa.
Mamorona asa avy amin'ny sisiny
Ity dia mety iray amin'ireo zava-baovao lehibe indrindra mamela hamorona asa amin'ny maha hetsika ao amin'ny S Planner anao dia mametraha fanairana na manoratra hafatra an-tsoratra. Ampiana fitaovana voafantina ao anatin'izany ny kompà, jiro azo ovaina azo zahana, na mpanapaka.
Samsung dia nampiditra ny mety hisian'ny ampanjifaina kiheba izay mamela ny fidirana amin'ireo takelaka fifandraisana, fampiharana ary asa. Ny personalization dia mandeha amin'ny toerana, habe ary mangarahara.
Tombony hafa amin'ity takelaka vaovao ity ny rindrambaiko vaovao tafiditra Anisan'ireny ny Naver V na ny fampiharana Yahoo toa ny Finance, Sports and News.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia manambara fiasa vaovao amin'ny sisin'ny Edge miolakolaka
Hannibal Ardid dia hoy izy:
ho an'ny efijery iraisana ihany koa io, ny ampahany mivalana dia saika tsy misy efijery
Valiny ho an'i Anibal Ardid
Sarina sary vaovao roa an'ny sisin'ny Samsung Galaxy S7 no sivana
Ahoana ny fanitsiana ny haavon'ny haavon'ny isaky ny fampiharana amin'ny Android